The Marsh: International Teen Performance Festival – Carla Befera & Company
THE MARSH YOUTH THEATER PRESENTS THE
INTERNATIONAL TEEN PERFORMANCE FESTIVAL
June 11 –12, 2022
For more information, the public may visit www.themarsh.org
For the International Teen Performance Festival long lead, please click here.
Twelve teenage girls in Zimbabwe are working with The Marsh theatre in San Francisco, learning how to tell their stories on stage. On June 11–12, these inspirational young women can be seen performing their final pieces during The Marsh's first-ever International Teen Fest, available to view via MarshStream.
Seen here: Wayne Harris, Director of the Marsh Youth Theater, working alongside the young women in Zimbabwe.
Seen here: Mudiwa, one of the young women in Zimbabwe, attending a virtual workshop taught by Marsh Youth Theater leaders.
Seen here: Des'ree, one of the young women in Zimbabwe, attending a virtual workshop taught by Marsh Youth Theater leaders.
Seen here: Maya, one of the young women in Zimbabwe, attending a virtual workshop taught by Marsh Youth Theater leaders.
Seen here: Chenesai, one of the young women in Zimbabwe, attending a virtual workshop taught by Marsh Youth Theater leaders.
Seen here: Rufaro, one of the young women in Zimbabwe, attending a virtual workshop taught by Marsh Youth Theater leaders.
Seen here: Tariro, one of the young women in Zimbabwe, attending a virtual workshop taught by Marsh Youth Theater leaders.
Seen here: Kudzayi, one of the young women in Zimbabwe, attending a virtual workshop taught by Marsh Youth Theater leaders.